नयाँ भाषा सिक्नका लागि सल्लाहहरू – Vocre
नयाँ भाषा सिक्नु भनेको कुनै कठीन कार्य जस्तो देखिन्छ -- यद्यपि यो छैन, जब सम्म तपाईंलाई थाहा छ तपाईंले के गरिरहनु भएको छ. भाग्यवश, हामी दोस्रो भाषाको रोडियोमा केहि बेर भएका छौं र नयाँ भाषा सिक्नको लागि केहि सुझावहरू छन् जुन तपाईंलाई कुनै समय नबख्तै धाराप्रवाह गराउँदछ।.
नयाँ भाषा सिक्नु भनेको कुनै कठीन कार्य जस्तो देखिन्छ — यद्यपि यो छैन, जब सम्म तपाईंलाई थाहा छ तपाईंले के गरिरहनु भएको छ. भाग्यवश, हामी दोस्रो भाषाको रोडियोमा केहि बेर भएका छौं र नयाँ भाषा सिक्नको लागि केहि सुझावहरू छन् जुन तपाईंलाई कुनै समय नबख्तै धाराप्रवाह गराउँदछ।.
नयाँ भाषा टिप सिक्दै #1: सानो सुरु गर्नुहोस्
बाबेलको टावर एक दिनमा निर्माण गरिएको थिएन (माफ गर्नुहोस्, हामीले गर्नुपर्ने थियो!). एकैचोटि धेरै धेरै जान्ने कोशिस गरेर आफैलाई नउठाउनुहोस्. ढिलो सुरु गर्नुहोस्. भाग your lessons.
नयाँ भाषा टिप सिक्दै #2: नेल उच्चारण पहिलो
यो अनुचित उच्चारण प्रकाशित गर्न गाह्रो छ यो मात्र पहिलो पटक सही उच्चारण सिक्नु भन्दा. शब्दहरू निकाल्ने प्रयास नगर्नुहोस्; वचनलाई हेर्दा तिनीहरूलाई सुन्नुहोस्. डाउनलोड गर्नुहोस् अडियो भाषा अनुवादक, जस्तै Vocre अनुप्रयोग, मा उपलब्ध गुगल प्ले एन्ड्रोइड वा को लागी एप्पल स्टोर IOS को लागी – if you need help pronouncing words.
नयाँ भाषा टिप सिक्दै #3: राम्रो बानी बनाउन सिक्नुहोस्
बानी अनुसन्धानकर्ताका अनुसार James Clear, राम्रो बानी विकास गर्न तपाईले चारवटा कुरा गर्नुपर्छ:
अध्ययनको लागि समय तालिका बनाएर भाषा सिक्नेलाई सकेसम्म सजिलो बनाउनुहोस्; तपाईंको तालिकामा अडिग रहनुहोस् र निर्णय गर्नुहोस् कि तपाईं अध्ययन गर्न कति समय खर्च गर्न चाहनुहुन्छ. कसरी भन्ने सिक्दै नमस्कार अन्य भाषाहरूमा वा साझा स्प्यानिश वाक्यांश एकैचोटि सम्पूर्ण भाषा सिक्नु भन्दा सजिलो छ.
यसलाई आकर्षक बनाउनुहोस्
नयाँ भाषाहरू सिक्न रमाईलो बनाउनुहोस्! थिम रातहरू फाल्नुहोस्; यदि तपाईं स्पेनिश भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ भने, खाना खानको लागि पाहुनाहरूलाई आमन्त्रित गर्नुहोस्. स्पेनिश खाना र वाइन सेवा गर्नुहोस्. कसरी स्पेनिश ककटेलहरू बनाउने सिक्नुहोस्, sangria जस्तै. Play music from different regions.
सँधै तपाईंको नयाँ भाषाको अध्ययन गर्नुहोस् बानी बसाले पछि तपाईंले प्राप्त गर्नुभयो, जस्तै नास्ता खाँदा वा दाँत माझ्नु. हरेक चोटि तपाईं दाँत माझ्नु हुन्छ, तपाइँको मस्तिष्कलाई तपाइँको भाषा पाठको लागि स्वचालित रूपमा थाहा हुनेछ.
नयाँ बानी एक दैनिक अभ्यास हो. एक दिन बिर्सनुहोस्? तपाईंको नयाँ बानीको बारे बिर्सनुहोस्! प्रत्येक दिन नयाँ सामग्री सिक्नुको सट्टा हिजोको पाठमा थप्न कोसिस गर्नुहोस्, पनि. तपाईले आफ्नो पाठलाई साना बिट्समा 'चुनकि ’' गर्न सक्नुहुनेछ — एक पटकमा धेरै धेरै मा लिनुको सट्टा.
नयाँ भाषा टिप सिक्दै #4: तपाईंको कारण पत्ता लगाउनुहोस्
जब तपाईं सम्झनुहुन्छ कि किन तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ, यो गर्न यो सादा सजिलो छ. हुनसक्छ तपाईं फ्रेन्च सिक्न चाहानुहुन्छ किनकि तपाईं फ्रान्सेली गाउँहरू हुँदै सडक यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ. हुनसक्छ यो नयाँ पदोन्नति हो जुन तपाईंको दोस्रो भाषाको आगोमा दन्किरहेको छ. तपाईंको कारण जे भए पनि, यसलाई लेख्नुहोस् र प्राय: उत्प्रेरित रहनको लागि यसलाई हेर्नुहोस्.
नयाँ भाषा टिप सिक्दै #5: अनुवाद अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्
त्यहाँ असंख्य कारणहरू छन् किन कि अनुवाद अनुप्रयोगले तपाईंलाई नयाँ भाषा सिक्न मद्दत गर्दछ. तर शीर्ष दुई छन्:
अन दि गोमा नयाँ शब्दहरू सिक्दै
तपाईं अपरिहार्य रूपमा आश्चर्य दिन जाँदै हुनुहुन्छ कसरी तपाईंको दिनभर तपाईंको नयाँ भाषामा दैनिक शब्दहरू भन्न. यसको सट्टामा यी शब्दहरू माथि हेर्नुहोस्, हामी हाम्रो जाँच गर्न सिफारिस गर्दछौं भाषा सिक्ने अनुप्रयोग यसको साटो र भविष्यको अध्ययन समयको लागि बचत गर्नुहोस्.
अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नका लागि अर्को महान कारण? तपाईं जाँच गर्न सक्नुहुन्छ सहि सजिलो सन्दर्भ को लागी शब्द को उच्चारण. धेरै नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू सही हुँदैन जब यो उच्चारणको कुरा आउँदछ (हामी तपाईलाई हेर्दैछौं, गुगल अनुवाद्).
नयाँ भाषा टिप सिक्दै #6: Conjugate Verbs Smarter — कडा छैन
यादगारको सट्टा क्रिया सम्बन्धी, प्रत्येक शब्दलाई म्यानुअल तरिकाले कसरी संयोजन गर्ने सिक्नुहोस् जब तपाइँ पहिलो पटक भाषा सिक्न शुरू गर्नुहुन्छ. तपाईले एक ढाँचा देख्नुहुनेछ जब क्रियापद कन्जेगेट गर्दा, र ढाँचा सिक्दै (यसको सट्टा प्रत्येक कान्जुगेशन सम्झनको सट्टा) तपाइँलाई त्यो भाषाको संयोजन कोड क्र्याक गर्न मद्दत गर्दछ.
नयाँ भाषा टिप सिक्दै #7: धेरै टिभी हेर्नुहोस्
अन्तमा, टन्स टिभी हेर्ने कारण! हामी तपाईंको मनपर्ने शो हेर्न सिफारिस गर्दछौं (एक एपिसोड छान्नुहोस् जुन तपाईंले एक हजार पटक देख्नु भएको छ र हृदय द्वारा प्लट थाहा छ). तपाईंको छनौटको भाषामा अडियो परिवर्तन गर्नुहोस् र हेर्न सुरू गर्नुहोस्! यदि तपाईं भर्खरै आफ्नो नयाँ भाषा सिक्न शुरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, सजिलो सन्दर्भका लागि अ sub्ग्रेजी उपशीर्षकहरू अन गर्न नहिचकिचाउनुहोस्. वा, हेर्नुहोस् विदेशी भाषा कार्यक्रम.
नयाँ भाषा टिप सिक्दै #8: तपाईंको मनपर्ने बच्चाहरूको पुस्तकहरू पढ्नुहोस्
बच्चाहरूको पुस्तकहरू वयस्क उपन्यासहरू भन्दा अनुवाद गर्न अलि सजिलो छ. पढेर सुरु गर्नुहोस् “The Little Prince” फ्रेन्च मा वा “Where the Wild Things Are” पोर्चुगिज मा. त्यसो भए, को लागी अग्रिम “Harry Potter” श्रृंखला वा “The Boxcar Children.” तपाइँ नयाँ शब्दावली सिक्न को लागी तपाइँको मनपर्ने बच्चाहरु को किताबहरु पुन: पढ्न पाउनुहुनेछ.
नयाँ भाषा टिप सिक्दै #9: भाषा एक्सचेन्ज स्टडी बडी फेला पार्नुहोस्
कुराकानी स्पेनिश सिक्न चाहनुहुन्छ, फ्रेन्च, जर्मन वा मन्डारिन? एक विदेशी विनिमय अध्ययन साथी पाउनुहोस्! तपाईंले स्थानीयले कसरी गर्ने सिक्नु हुन्छ — all while making new friends.
नयाँ भाषा टिप सिक्दै #10: आफूलाई नयाँ भाषामा डुबाउनुहोस्
वास्तवमै नयाँ भाषा सिक्ने उत्तम तरिका भनेको भित्र छिर्नु हो. यदि तपाइँ यस महिना चीनको लागि यात्रा स्विच गर्न सक्नुहुन्न, केहि मन्डारिन भाषा बोल्ने साथीहरूलाई आमन्त्रित गर्नुहोस् र उनीहरूको मातृभाषामा शीर्षकको बारेमा कुरा गर्न तिनीहरूलाई सोध्नुहोस्. आफ्नो शहर मा एक अंतर्राष्ट्रिय जिल्लाको भ्रमण गर्नुहोस्. वा, just pick upanewspaper in your desired language and start reading.
यो सुरुमा डरलाग्दो देखिन्छ, तर निराश नहुनुहोस्. सबैले पानीको बाहिर माछा जस्तो महसुस गर्छन् जब उनीहरूले नयाँ भाषा सिकिरहेका छन्. यसलाई ढिलो लिनुहोस्, pick out the words you know and save the words you don’t know for later.
यदि तपाईं देश बाहिर जानुभएको छ भने आफैलाई यात्रामा डुबाउन, मा हाम्रो गाइड जाँच गर्नुहोस् अन्तिम मिनेट यात्रा को लागी सबै भन्दा राम्रो यात्रा अनुप्रयोगहरू.